हिमालय खबर | यो निर्वाचन नेपाली समुदायका लागि पनि महत्वपुर्ण छः सुरेन श्रेष्ठ
प्रकाशित १९ कार्तिक २०७५, सोमबार | 2018-11-05 12:30:01
सुरेन्द्र (सुरेन) श्रेष्ठ कोलोराडोमा डेमोक्रेट पार्टीमा सकृय हुनुहुन्छ । अमेरिकामा हुन गईरहेको मध्यावधि निर्वाचनमा पनि श्रेष्ठले उम्मेदवारलाई आर्थिक सहयोग गर्ने देखि विभिन्न कार्यक्रममा सहभागिता जनाइरहनु भएको छ ।
यो मध्यावधि निर्वाचन अमेरिकाको राजनीतिमा किन महत्वपुर्ण छ ? नेपाली समुदायले किन चासो राख्नुपर्छ ? यसबारेमा श्रेष्ठसँग हिमालयखवरका लागि लिईएको अन्तरवार्ताको संक्षेप ।
यो मध्यावधि निर्वाचनलाई तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ ?
- यो निर्वाचन अमेरिकी राजनीतिका लागि निकै महत्वपुर्ण छ । मगंलवारको निर्वाचनले कांग्रेस र सिनेटमा कुन पार्टी डेमोक्रेट वा रिपब्लिकन कसको बहुमत हुन्छ यो महत्वपुर्ण हो ? अहिले दुवै स्थान अर्थात सदनमा रिपब्लिकन पार्टीको बहुमत छ । यदी यो अवस्था परिवर्तन भयो र डेमोक्रेट पार्टीले बहुमत ल्यायो भने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आफ्नो लहडमा अगाडी वढ्न अंकुश लाग्छ । चेक एण्ड ब्यालेन्स हुन्छ । इमिग्रेशन मुद्दा हामी सबैको चासोको विषय हो । यो मुद्दामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाको संविधानलाई समेत चुनौती दिने खालका अभिव्यक्ति दिएका छन् । यदी डेमोक्रेटले जिते भने राष्ट्रपतिले चाहेजस्तो कानुन ल्याउन सक्ने छैनन् । इमिग्रेशन मुद्दामा डेमोक्रेट पार्टी बढी उदार छ ।
अमेरिकाको संविधानमा कांग्रेस र सिनेट, राष्ट्रपति र न्यायापालिका चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्ने निकाय हुन् । राष्ट्रपतिलाई आफ्नो लहडमा हिड्न नदिन कांग्रेस र सिनेटको भुमिका हुन्छ । अधिकार छ । यो शक्तिको सन्तुलनका लागि जरुरी छ ।
कांग्रेस र सिनेटमा डेमोक्रेटको बहुमत आयो भने के हुन्छ ?
- चेक एण्ड ब्यालेन्स अर्थात शक्ति सन्तुलन हुन्छ । राष्ट्रपतिसँग कार्यकारी अधिकार त छ, तर उनी कतिपय निर्णयका लागि कांग्रेस र सिनेटमा जानुपर्छ । यसबेला फरक पर्छ ।
यसबाहेक अहिलेको स्वास्थ्य नीति कम र मध्यम आम्दानी हुनेका लागि फाइदाजनक छैन । दिर्घकालका लागि यी नीतिले फाइदा गर्दैन । परिवर्तन हुनै पर्छ । यसका लागि पनि वासिंटनमा परिवर्तन हुनु जरुरी छ ।
यो मध्यावधि चुनावमा नेपालीको चासो कति छ ?
नेपालीहरुको धेरैनै चासो छ । अहिलेको निर्वाचनका मुख्य मुद्दा स्वास्थ्य बीमा, इमिग्रेशनसँग हामीपनि प्रत्यक्ष जोडिएका छौं । नेपालीले पाएको टीपीएस नविकरण भएन, हजारौं नेपालीलाई असर परिराखेको छ । इमिग्रेशन मुद्दामा पनि हामी उदार नीति चाहान्छौं । तर, अहिलेको ह्वाइट हाउस प्रशासन इमिग्रेशन मुद्दामा कडा हुन खोजिरहेको छ । हाम्रो नेपाली समुदाय न्यून र मध्यम आम्दानी हुने वर्गमा पर्छ । स्वास्थ्य बीमा लगायतका क्षेत्रमा पनि हामी सर्वसुलभ होस भन्ने चाहन्छौं । यसैले यो निर्वाचनमा नेपालीको चासो भएको हुनुपर्छ ।
तपाई कोलोराडोमा बस्नुहुन्छ ? यहाँको अवस्था के छ ?
कोलोराडोमा गभर्नर पदका लागि डेमोक्रेट पार्टीवाट जेरार्ड पोलिस उठ्नु भएको छ । उहाँ नेपाल र नेपालीको हितैषी हो । कांग्रेसमा नेपाललाई सहयोग गर्न गठन भएको नेपाल ककसको उहाँ सहसंयोजक पनि हुनुहुन्छ । मलाई लाग्छ उहाँले जित्नुहुन्छ । जेरार्ड पोलिस अहिले नेपालको घरमा तीनपटक आएर नेपाली समुदायसँग भेटघाट गर्नु भयो । यो पनि सकरात्मक कुरा हो । उहाँले आफुले जितेमा नेपालको व्यापार पर्यटन बढाउन गभर्नर अफिसमा कार्यालय खोज्ने पटक पटक बताउनु भएको छ । यो नेपालका लागि फाइदाको कुरा को । नेपालमा हाइड्रोमा लगानी गर्न यहाँका लगानीकर्ता जानुपर्छ भन्ने सोच उहाँको छ ।
मैले केही दिन अघि जेरार्डर्ला सोधेको थिए । तपाई गभर्नर भएपछि नेपाल ककसमा को सहसंयोजक हुन्छ भनेर । उनले यसका लागि नाम पनि तय गरिसकेको छन् । बोल्डरवाट कांग्रेस सदस्य उम्मेदवार जोसेफ (जो) न्यूसेगलाई नेपाल ककसमा बस्न अनुरोध गरिसकेको उनले मलाई बताएका थिए । जोसेफ युवा र निकै डायनामिक नेता हुन् । मलाई उनको कुरा सुन्दा अर्को बाराक ओबामा जस्तै लाग्छ । जोले जिते भने राम्रो हुन्थ्यो ।